डेङ्गुको प्रकोप र लाचार सरकार – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
डेङ्गुको प्रकोप र लाचार सरकार
२०७६ आश्विन १६, बिहीबार ०८:१५ गते
यतिखेर सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको छ डेङ्गु रोग । सन् २००६ मा पहिलोपटक नेपालमा देखा परेको यो रोगले यस्तो महामारीको रुप लिएको यो पहिलोपटक हो । यसअघि पनि डेङ्गुको समस्या नदेखिएको होइन, तर यसपटक बढी डेङ्गुको समस्या देखा परेको छ । सूक्ष्म भाइरसबाट लाग्ने यो रोग फैलिने माध्यम नै लामखुट्टेको टोकाइ हो । अल्लि फरक खालको सानो आकारको लामखुट्टेले टोकेर यो रोग सर्छ । यो रोग सानै लामखुट्टेले दिउँसोमा मात्र टोक्ने, सफा र जमेको पानीमा फुल पार्ने र फुलसमेत संक्रमित हुने विशेषता यसको हुन्छ । खासगरी, कालो ट्याङ्की, टायर, फुलदानी, कुलर, फालिएका बोतलजस्ता आदि स्थानमा फुल पार्ने हुँदा लामखुट्टे बनिसकेपछि टोकाइबाट बच्न जनचेतना फैलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुँदा मिलेर समस्याको समाधान खोज्नुको साटो स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा माग्नु समस्याको समाधान होइन । स्वास्थ्यमन्त्रीले डेङ्गु रोग नियन्त्रणका लागि ठोस पहल गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । डेङ्गु अहिले ५६ जिल्लामा फैलिइसकेको छ । कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन्, तर सरकारले नियन्त्रणका लागि त्यति ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । डेङ्गुको खास वैज्ञानिक उपचार न्यूनीकरण गर्नतिर सरकार लागेको भए यो रोगले यति व्यापक रुप लिने थिएन । सरकारले बेलैमा ध्यान दिन सकेन र अहिले देशभरि नै यो रोग फैलिएको छ । सरकारले कुरामात्रै गरिरहेको छ, कार्य सुरू गर्न सकेको छैन । सरकारकको यो ढिलासुस्ती हो ।
खास लक्षित समूहसम्म चेतनामूलक कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । कार्यक्रम होटेल र कार्यालयहरुमा भएका छन् । त्यहाँ बोलाइएका मानिसलाई डेङ्गुको बारेमा सुनाइयो, तर ती सुन्ने सहभागीले के अरुलाई प्रशिक्षित पारेका छन् त ? डेङ्गु नियन्त्रण र सचेतनाका नाममा ठूलो सरकारी ढुकुटी सिध्याउने खेल पनि भइरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाबाट आयोजना गरेको डेङ्गु नियन्त्रण जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रममा ¥यालीसमेत भएको थियो । हाल टोलटोलमा गएर जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ । गाउँगाउँ र गल्लीगल्लीमा पसेर सरसफाइ कार्यक्रम गर्ने, लामखुट्टे हुर्कने र फुल पार्ने स्थानको पहिचान गरी त्यसलाई सोही स्थलमै नष्ट गर्ने, सामूहिक उत्तरदायित्व वहन गर्न जनतालाई सचेत तुल्याउने, रोगको आशंका भएमा जँचाइ चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार गर्ने र लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्ने काम चेतनामूलक कार्यक्रमबाट सम्भव हुन सक्छ । अनावश्यक तामझाम गर्नुको साटो बेलैमा सबैले नियन्त्रणका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।
देशमा डेङ्गुको महामारी छ । सरकारले केही गर्दै गरेन भन्नेचाहिँ होइन, तर रोगले जसरी देशव्यापी रुप लिएर हजारौँलाई प्रभावित गरिरहेको छ त्यसको सापेक्षतामा सरकारका प्रयास न्यून छन् । सामान्यतया यस्तो बेला सरकारले आपतकालीन उपाय अपनाएर देशभर स्रोत र साधन परिचालन गर्दै प्रतिरोधात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
समस्या के हो भने सरकारले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अपनाएका उपाय धेरै कम छन् । डेङ्गु उपचारको अर्को अर्थ–राजनीतिक पक्ष मुनाफा हो । पुँजीवादी समाजको अस्तित्व निजी क्षेत्रको लगानी र त्यसले आर्जन गर्ने मुनाफामा अडेको हुन्छ । यतिबेला नेपालमा डेङ्गुको महामारी फैलिएसँगै सबैजसो निजी क्षेत्रका अस्पतालले यसलाई मुनाफा कमाउनेमात्रै होइन कि कुम्ल्याउने मौकाका रुपमा उपयोग गरेका छन् । चितवनमा निजी अस्पतालले डेङ्गुको उपचारका लागि तीन सय पचास रूपैयाँमा पाइने परीक्षण कीटको मूल्य २६ सयसम्म बिरामीबाट असुल गरेको सुनिएको छ । दलाल पुँजीवाद, आसेपासे पुँजीवाद हुँदै मुनाफाखोरी र लुटाहा पुँजीवादको सिकार कहिलेसम्म भइदिनुपर्ने हो ?
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा प्रभावित पारिसकेको र नेपालमा संक्रमण बढाइरहेको लामखुट्टेको भाइरस एउटै हो । भारतका वरिष्ठ कीट विज्ञ डा. बीएन यसविरूद्ध समुदायबाट अभियान अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । डेङ्गु बढ्नुमा सरसफाइको कमी, अव्यवस्थित सहरीकरण, उच्च जनघनत्व, बसाइँसराइ कारक रहेको हुन्छ । यसको निश्चित औषधि छैन । लामखुट्टेको अण्डा तथा लार्भा नष्ट गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । यो लामखुट्टे सफा पानीमा बस्ने र त्यसमै फुल पार्ने, दिउँसोमात्रै टोक्ने, सामान्य लामखुट्टे सानो तर गति भएको र बाघका जस्तो पाटा भएको हुन्छ ।
सरकारको शिथिल प्रयासका कारण डेङ्गु रोगले नेपालको धेरैजसो क्षेत्रमा त्रास फैलाएको छ । रोग नियन्त्रण हुनुको साटो फैलिँदै जानु विडम्बना हो । सरकारको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्नु, मौसम गर्मीयाम हुनु, सामाजिक अभियानसमेत फितलो हुनु, रोग नियन्त्रणको विषय ओझेलमा पर्नु, रोगीको समयमा पहिचान गरी उपचार नगर्नु तथा लामखुट्टे नियन्त्रणमा आउन नसक्नु रोग फैलिनुका मुख्य कारण हुन् । नेपालीको जस्तो आर्थिकस्तर कम भएको समाजमा यो रोगको प्रकोपबाट धेरै प्रभाव पर्ने भएकोले सरकारले समयमा नै समाधान खोज्नु जरूरी छ । रोग नियन्त्रणका लागिमात्रै प्रकृतिको पर्खाइ भन्दा अहिले सामाजिक अभियान तथा सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।